Frank Lampard oo dhaleeceyn u jeediyay macalinka reer Portugal ee Jose Mourinho sababa la xiriira… – Gool FM
Laacibka Manchester City ee Ferran Torres oo jebiyay rikoor u yaallay Kabtanka Barcelona ee Lionel Messi muddo 11 sano ah
Wada xaajoodka ay Manchester United la bilawday Varane, Chelsea oo hoggaanka u heysa iyo koox saddexaad oo kula tartammeysa saxiixa difaaca Real Madrid
Waa kee saxiixa ay Barcelona ka hormarineyso hubinta mustaqbalka Lionel Messi?
Frank Lampard oo dhaleeceyn u jeediyay macalinka reer Portugal ee Jose Mourinho sababa la xiriira…
Dajiye December 25, 2019
(London) 25 Dis 2019. Tababaraha kooxda kubadda cagta Chelsea ee Frank Lampard ayaa ka hadlay khaladkii uu sameeyay Jose Mourinho sanado ka hor, kaddib markii uu u ogolaaday xiddigaha Maxamed Saalax iyo Kevin De Bruyne inay ka tagaan garoonka Stamford Bridge.
Jose Mourinho oo ah tababaraha haatan ee kooxda Tottenham, ayaa kala soo shaqeeyay labadan xiddig bilawga xirfadooda kubadda cagta kooxda ka dhisan Galbeedka Magaalada London ee Chelsea, laakiin ma uusan siinin fursad ay kaga qeyb galaan ama ay saameyn ugu yeeshaan naadiga Blues.
Kevin De Bruyne ayaa markaas kaddib looga iibiyay kooxda Wolfsburg qiimo dhan 18 milyan ginni sanadkii 2014, halka Maxamed Saalax uu ugu dhaqaaqay naadiga reer Talyaani ee Roma sanadkii 2016 aduun dhan 12 milyan ginni.
Wargeyska “The Sun” ee dalka England ayaa wuxuu shaaca ka qaaday wareysi uu Frank Lampard kaga hadlay arrintan wuxuu ku yiri:
“Haddii aadan samir u yeelanin xiddigaha da’ayarta ah, waxaa laga yaabaa inaan ku soo afjarno xaalad la mid ah tii aan ku jirnay markii aan u ogolaanay inay baxaan labo ciyaaryahan, kuwaasoo haatan ku jira heer caalami ah”.
“Saalax iyo De Bruyne waxay joogeen kooxda Chelsea da’adooda waxay aheyd 20 iyo 21 jir, laakiin ma aysan sii heysanin tababarayaashii waqtigaas joogau, haddii aan isla booskaan ku jiri lahaa xilligaas waxaan ka shaqeyn lahaa inay sii joogaan” ayuu yiri tababare Frank Lampard.
“Joojinta Liverpool ee xilli ciyaareedkan waxay la mid tahay sida mucjiso oo kale” – xiddig horre ee kooxda Man United ah
Tababare Solskjær oo qorsheenaya in xiddig ka tirsan Real Madrid uu keeno garoonka Old Trafford